ट्राफिक व्यवस्थापनमा दाताको भर, खालि हात हल्लाएर र सिटी फुुकेर कहिलेसम्म गर्ने ट्राफिक व्यवस्थापन ? – Rajdhani Daily
ट्राफिक व्यवस्थापनमा दाताको भर, खालि हात हल्लाएर र सिटी फुुकेर कहिलेसम्म गर्ने ट्राफिक व्यवस्थापन ?
काठमाडौं । समस्या नै समस्याले भरिएको काठमाडौंमा एउटा विकराल समस्या हो ट्राफिक व्यवस्थापन । ट्राफिक व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी सडक व्यवस्थापनमा खटिने ट्राफिककै भन्ने बुझिए पनि सो बुझाइ असत्य रहेको ट्राफिक प्रहरीका अधिकारी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा उभिएर इशारा गर्ने र ट्राफिक उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नेबाहेक ट्राफिकको कुनै अधिकार छैन ।
ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता जयराज सापकोटाका अनुसार सडकमा रहेका ट्राफिक लाइट तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाका लागि महŒवपूर्ण मानिने जेब्रा क्रसिङ निर्माणको जिम्मा ट्राफिक प्रहरीलाई छैन । यसको जिम्मा सडक विभाग, महानगर तथा सरकारको हो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले झन्डै २८ वर्षअघि सहयोगस्वरूप सडकमा राखेको ट्राफिक लाइट केही वर्षदेखि बल्न छाडेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
उपत्यकामा केही स्थानमा थपिएका ट्राफिक लाइट पर्याप्त मात्रामा छैनन् । सडकमा जेब्रा क्रसिङको संकेत मेटिएको लामो समय भएको छ । त्यसको मर्मतसम्भार र रङ पोत्ने मात्र गर्न नसक्दा उपत्यकाका मुख्य त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, सोह्रखुट्टे, बबरमहल, टेकु, कालिमाटीलगाायत अधिकांश स्थान तथा चक्रपथमा यो समस्या निम्तिएको छ । यसबाट सडक सुरक्षामा समेत गम्भीर चुनौती देखिएको सर्वसाधारणको अनुभव छ । उपत्यकाका सडक मर्मत सम्भार र निर्माणको जिम्मा सडक विभाग, नगरपालिका तथा महानगरपालिका र सरकारको हो । ती निकायले भएका सडकको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् भने भएकाको पनि मर्मतमा चासो दिन नसकेको पाइएको छ ।
सम्बन्धित निकाय यस्ता समस्या समाधान गर्न उदासीन बन्ने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । सडकमा स्काइब्रिज तथा फुटपाथ र डिभाइडर छैनन् । यस्ता स्काइब्रिज र फुटपाथ व्यवस्थापन, पार्किङलगाायतका संरचनाको निर्माण गर्ने निकाय मौन रहने गरेका छन् । यस्ता विषयमा ट्राफिकसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा समेत समन्वय नगरिएको ट्राफिकका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । कोसेली र उपहारस्वरूप दिइएका सामग्रीबाट मात्रै ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
ट्राफिक प्रहरी रित्तो हात हल्लाउँदै सवारी व्यवस्थापन गर्ने गर्दछन् । सडक छन् तर ती सडकमा सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार निर्माण गरे भने गरे नत्र सोही अवस्थामा सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुबाहेकको विकल्प ट्राफिकसँग छैन । कसैले दिएका केही थान उपहारलाई उपयोग गर्ने र बिग्रिँदै जाँदा मर्मत गर्न नसकिएपछि यस्ता अभियान यसै हराएरसमेत जाने गरेका छन् । हाल ट्राफिकले उपयोग गर्दै आएका रातको समयमा देखिने फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट, रातमा रोक्न संकेत गर्ने म्याजिक लाइट, सवारीको गति मापन गर्ने राडार मेसिन कुनै न कुनै दाताको सहयोगमा आएका छन् । ट्राफिक प्रहरी आफैंले भिœयाएका ब्रेथलाइजर समेतमा समस्या देखिएका छन् । हाल चालू अवस्थामा उपत्यकामा २० देखि २५ को संख्यामा मात्र रहेका छन् । यस्ता ज्याकेट, राडारलगाायतका उपकरणमा भने बैंक, सिमेन्ट कम्पनी तथा विभिन्न निकायले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ट्राफिकलाई उपलब्ध गराएका हुन् । दाताले मर्मतसम्भार गरे यस्ता अभियान चल्ने गरेका छन् अन्यथा यी उपकरणले काम गर्न छाडेसँगै ट्राफिकको अभियानसमेत रोकिने गरेको छ । हाल सवारीको गति नाप्ने राडार बिग्रिएसँगै तीव्र गतिमा सवारी चलाउनेलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन । त्यस्तै मापसे चेकजाँचका मेसिनमा कमि आएसँगै यसमा समेत कठिनाइ देखिएको छ ।
कतिपयले सडकमा उभिनेबित्तिकै सडकको समस्याको जिम्मा नै ट्राफिक प्रहरीको भएको देख्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीहरू बताउँछन् । सडक समयमै नबन्नु खाल्डाखुल्डी धुलो धुँवालगाायतमा समेत ट्राफिक प्रहरीलाई दोषी र जिम्मेवारी रहेको देख्ने गरेका छन् ।
समग्रमा काठमाडौंको सडकमा सवारी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ट्राफिक प्रहरीसँग भने सडकमा उभिनेबाहेकको सडकमा अरू कुनै अधिकार छैन । तर, सडक र ट्राफिकसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी दिएको खण्डमा प्रहरीले आफैं सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्ने ट्राफिकका अधिकारी अरु बताँउछन । सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक पहल गर्दासमेत बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ । यसबाट सडकसँग सम्बन्धित निकाय सडकमा नदेखिने र सडकमा देखिने ट्राफिकप्रति सर्वसाधारणले आक्रोश पोख्ने गरेको अनुभव ट्राफिकको छ ।
Tags: ट्राफिक व्यवस्थापनमा दाताको भर